2021 – Studio Art cAMPUS
Fashion Design and Styling / Fashion Business ဘာသာ ကို သင်ယူချင်သူများ အတွက် Exclusive Course ကို သင်ကြားနိုင်ပါတယ်။
မတော်တဆ Wes Anderson
I now understand what it means to be accidentally myself. Thank you. Wes Anderson “Accidentally Wes Anderson” တဲ့………..စာအုပ်ထူကြီးရဲ့ နာမည်က။မျက်နှာဖုံးကာဗာက ဓာတ်ပုံတစ်ခုတည်းနဲ့တင် လက်ကအလိုလိုလှမ်းမိသွားလေရဲ့။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဒီလိုစာအုပ်ကြီးတွေကို ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်ကြီးတွေ ရဲ့ ဧည့်ခံစားပွဲတွေပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကော်ဖီ ဆိုင်ကြီးကြီး တစ်ခုရဲ့ စာအုပ်စင်အမြင့်တစ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရတတ်တယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ကိုဘုန်းတွေ့ခဲ့ရတာလည်း ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ နာမည်ကြီး Hair saloon တစ်ခုမှာ ၊အချိန်ကာလအားဖြင့် ကိုဗစ်ဖျက်လို မပျက်ခဲ့တဲ့မြို့ ကို “မအလ”မဖျက်ခင်လေးမှာပေါ့။ နာမည်ကြီး The Grand Budapest Hotel ဇာတ်ကားရဲ့ ဒါရိုက်တာ Wes Anderson နာမည်နဲ့ “မတော်တဆဖြစ်သွားသော” ဆိုတဲ့ နာမဝိသေသနပုဒ်နဲ့ […]
ARIEL THI နဲ့ အမေး ကဏ္ဍအပိုင်း |5minute Blogs
FASHION and STYLE sustain platform ပေါ်ကို ရောက်ဖို့ ဘာလို့ လိုအပ်တာလဲ ၊ ဘာတွေလုပ်သင့်ပါသလဲ။ Fashion Industry မှာ sustainable ဖြစ်တဲ့ careers တွေ ဖန်တီးဖို့ လိုပါတယ်။ Sustain ဆိုတာကို ပြောပြရရင် ထိန်းထားတာ၊ အကျိုးပြုတာ တွေကို ဆိုလိုတဲ့ စကားလုံးလေးပါ။ Sustainable ဆိုတာက တကယ်တော့ စကားလုံးသက်သက် အလှထည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်က စပြီးတော့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်တာ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အများကြီး အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ Sustain ဆိုတာ လွယ်လွယ် သိကြတဲ့တိုင်းဆို သဘာဝပစ္စည်းတွေ နဲ့ ပြုလုပ်ထားသော အရာတွေကို sustainable ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး သိကြမှာပါ။ Sustainable fashion ဆို လူကို […]
Durable and ageless thrift-store clothes are the hallmark of grunge fashion, which is typically worn inaloose, androgynous manner to minimize the importance of the silhouette. The bands’ Grunge, Coldplay, and Pearl Jam are credited with popularizing the look.5Simple Ways to MakeaBasic Pair of Jeans IntoaGrunge-Chic Killer Outfit […]
Yawai Htoo Myat
Good evening everyone! ဒီနေ့မှာတော့ Jazz Age ရဲ့ Fashion Characteristics တွေအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Jazz Age ဆိုတာနဲ့ အားလုံး ပြေးမြင်ကြမှာကတော့ Flapper တွေပါပဲ။ Yes, of course, in Hollywood, they’re called “IT GIRL.” 1920s Jazz Age မှာ Coco Chanel, Poiret, Mariano Fortuny, Jean Patou စတဲ့ နာမည်ကြီး Fashion Designer တွေ က silhouette တွေပြောင်းပြီး revolution တွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Flapper တွေရဲ့ Characteristics တွေ မှာသဘောအကျဆုံးက တော့ အမျိုးသမီးတွေ ဟာ […]
The Student Gallery Think your project, tutorial, or story should be here?
Make an editorial photoshoot brief. An editorial shoot’s purpose is to present stories and ideas inavisually appealing manner. Editorial fashion photographs are frequently published alongside text or an overall topic in magazines or online media to educate or inspire readers. What story do you want to tell with your final fashion photos? What […]
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆ သိန်းကျော်ကတည်းကပင် ခေတ်ဦးလူသားတို့သည် ရာသီဥတုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တာရယ်တို့ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် တိရိစ္ဆာန်တို့၏ သားရေကို ဖြတ်တောက်ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် လူတို့၏မူလသန္ဓေတွင်ပါဝင်လာသည့် စမ်းသစ်တီထွင်လိုစိတ်ကို အခြေခံကာ ပိုမိုသေသပ်ကျနစွာ ချုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် အပ်နှင့်အပ်ချည်တိုနှင့်အတူ ပိုးထည်ချည်ထည်တို့သည်လည်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အဝတ်အစားဒီဇိုင်းများနှင့်အတူ ၎င်းတို့ကို ချုပ်လုပ်ဖန်တီးသော ပညာရပ်တို့ကို အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲစေခဲ့ခြင်းအကြောင်းတရားသည် ၁၉ ရာစု၏ စက်မှုတော်လှန်ရေးတွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော် အပ်ချုပ်စက်များကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ၂၀ ရာစုတွင်မူ ရှုပ်ထွေးများပြားလှ​သော လူနေမှူပုံစံနှင့် လူတန်းစားအခြေအနေတို့ပေါ်မူတည်ပြီး အင်္ကျီအဝတ်အစားဒီဇိုင်း၊ ပိတ်စအမျိုးအစားတို့သာမက ဖန်တီးချုပ်လုပ်သော နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးတို့ ပြောင်းလဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်မှာ ယနေ့ ၂၁ ရာစုသို့အရောက်တွင်တော့ အဝတ်အစားများကို ဖန်တီးချုပ်လုပ်သည့်အတတ်ပညာသည် အမြင့်ဆုံးအခြေအနေတစ်ခုသို့ ရောက်သည်အထိ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ […]
လူသား( Human ) နှင့် အရောင်(color) ဆိုသည်မှာ မွေးစမှ သေဆုံးသည့်ချိန်ထိ ခွဲခြားမရသော အပေါင်းအဖော်များဖြစ်သည်။ မွေးစ “အူဝဲ” ဆိုသည်နှင့် သင့်အသားရောင်ကိုကြည့်ပြီး သူနာပြုတို့ သင့်ကျန်းမာရေးကို မှတ်ချက်ချကြသည်။ သင့်မိခင်သီဆိုသော သားချော့တေးက ” လူကလေးရယ်ငို၊ ခိုဖမ်းလို့ပေး။ ခိုဖြူခိုပြာ နက်ကယ် ဖမ်းခက်လှသေး”ဖြစ်သည် ။ သင့်ကိုပတ်ထားသော အနှီး၏ အရောင် အဖြူရောင်ဖြစ်နေသည်ကပင် တိုက်ဆိုင်မှူတစ်ခု‌တော့မဟုတ်‌ချေ။ အသက်ရှင်သန်ခြင်းနှင့် အရောင်တို့သည် အထူးပင်ဆက်စပ်နေသည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်တို့ အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ လူသားတို့ ရှင်သန်နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကဲ့သို့ အ‌ရောင်စုံလင်သော ဂြိုလ်ကို စကြာဝဌါထဲတွင် မတွေ့ရှိသေးချေ။ သစ်တောသစ်ပင်တို့၏ အစိမ်းရောင်၊ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတို့၏ အပြာရောင်တို့က အသက်ရှိနေသော ကမ္ဘာဟု အသိအမှတ်ပြုထားသကဲ့ပင်။ ဆွစ်ဇ် လူမျိုး expressionist ပန်းချီဆရာ Johannes […]
How does it look asastudent of fashion? So what about life asastudent of fashion? It’s really stunning and I love every second that irritates me. You never know who and what you will meet next. It’s full of excitement. you never know. You move as fast as the industry itself […]
Above: evolution of fashion from 1500-2021 Fashion World – Contemporary Retail Spaces ကမ္ဘာဦး စ ကနေ အဝတ်အထည်ဆိုင်ရာများကို ဝတ်စားမှု အလေ့အထ ရောက်သည်ထိ Society တစ်ခု ဖြစ်လာသည့် prehistory ကနေ ယနေ့ ထိတိုင် တူညီတဲ့ အချက်ကတော့ အခြေခံကျသည် စားဝတ်နေရေး လို့ ခေါ် ဆိုခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဝတ်အထည် ဝတ်စားမှုများကို ခေတ်အလိုက် စံနှုန်း ထားရှိမှု မတူညီကြပါ။ ထိုအတူ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများသက်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ ယဉ်ကျေးမှု ၊ လူအဖွဲ့စည်း ၊ ခံယူချက်စသည့် အချက်များပေါ် မူတည်၍ ဝတ်စားပုံ ( fashion ) များဟုတ် ခေါ် ဆိုလာကြ သည်ဖြစ်သည်။ ခေတ်ရဲ့ စံထားပုံ လူနေမှု အဆင့်အတန်း များပေါ် မူတည်၍Style ကျသည်ဟုလက်ခံပုံ အမျိုးမျိုးများပေါ် မူတည်၍ Style ကျသည် ဟုခေါ်ဆို လာကြသည်ဖြစ်သည်။ အဝတ်အစားများကို စားသောက်ကုန်များ ရောင်းဝယ်မှု များ ပြုလာကြသည့် ၁၂ ၊ ၁၃၊၁၄၊၁၅ ရာစုနှစ်များမှ အစရှိသော middle age အစပြုလာသည့် ကနေ ၁၉ ရာစု ကုန် ၂၀ရာစုမှ စ၍ လက်လီလက်ကားရောင်းချမှု RETAILING များ အစပြုခဲ့သည်မှာ အခုဆို နှစ်ပေါင်း ရာစုကျော်သည့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု ဆိုင်ရာ စျေးကွက်တစ်ခု ဖြစ်နေစဲ ဖြစ်သည်။ Fashion World ဟုခေါ်ဆို ကြသော Fashion Capital မြို့ နိုင်ငံ များ ဖြစ်သောအနောက်နိုင်ငံ – Europe ၊ UK ၊ USA နိုင်ငံများရဲ့ ဦးဆောင်မှု စျေးကွက်များရဲ့ လည်ပတ်မှု မှာ ယခုနှစ်သည့်တိုင် မပြောင်းလဲသေးသော Fashion Industry တစ်ခု ဖြစ်သည်။ Fashion ရဲ့ ရေစီးကြောင်းများကို ပြောင်းလဲ မှု တစ်ခု ပြုနိုင်ရန် အဓိက Fashion မြို့တော်များဟုတင်စားကြသော နိုင်ငံကြီးများရဲ့ ရေစီးကြောင်း ကို လိုက်ပါ စီးမျှော်ကြသော စျေးကွက်ဆိုင်ရာများကို Retailing ဆိုင်ရာ Fast Fashion များဟုတ် ခေါ်တွင်ပါတယ်။ Fashion Industry တစ်ခုရဲ့ Retailers များရဲ့ Knowledge & Ethics ဆိုင်ရာများ ပေါ် မူတည်ပြီး ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးများနှင့် direct သက်ရောက်မှုများ ရှိနေသည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ရှိနေသည်ကို 21 ရာစု မှစ sustainable developing ဆိုင်ရာ up […]